မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စာပို့ပြီး ချိန်းဆိုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၉)ခု – Gentleman Magazine
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီကို ဖုန်းကနေတဆင့်စာပို့ခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီး သေချာစဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောမယ်ဆိုရင် အဖြေတစ်ခုကို သေချာပြင်ဆင်ဖြေဆိုဖို့ အချိန်အများကြီးမရနိုင်သလို သင့်ရဲ့အသံနေအသံထားကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ စာပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။ စာပို့တဲ့နေရာမှာ မိန်းကလေးဖက်က ပြန်စာရရှိဖို့နဲ့ အခြေအနေကောင်းလို့ အပြင်မှာတွေ့ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ချိန်းတဲ့နေရာကို သေချာပေါက်ရောက်လာစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။
၁။ သူမကို စတင်ချဉ်းကပ်ချိန်မှာကတည်းက စာပို့ပါ။
စတွေ့ပြီးသုံးရက်နေမှာ ပြန်ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းကို မေ့ထားလိုက်ပါတော့။ သုံးရက်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ကို စတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်က မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အခြားယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို သိရပြီဆိုတာနဲ့ စကားပြောနေတုန်းဖြစ်စေ၊ ထွက်လာပြီးသိပ်မကြာခင်ဖြစ်စေ အချိန်တိုအတွင်းမှာကို စာပို့သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း သူမ သိရှိပြီးသားဖြစ်သွားစေနိုင်သလို နောက်ထပ်စာတွေ ပို့တဲ့အခါမှာလည်း စာပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို သိပ်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက် စတင်တွေ့ဆုံပြီးချိန်မှာပဲ စာပို့လိုက်တာက အပြန်အလှန်စာပို့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်နေ့တွေမှာ သူအနေနဲ့ စာပြန်ပို့နိုင်ဖို့ လွယ်ကူသွားစေပါတယ်။
ပထမဆုံးစာတွေ ပေးပို့ချိန်မှာ တွေ့ဆုံချိန်က ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်သိထားပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုအကြောင်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ သူမမှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်မွေးထားတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုပေးပို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က စာတွေပေးပို့ရာမှာ သူမရဲ့နာမည်ကို ထည့်သွင်းရေးသားတာက ပိုပြီးရင်းနှီးခင်မင်စေပါတယ်။
၃။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ စာပို့ပါ။
သင့်အနေနဲ့ စတင်တွေ့ဆုံချိန်က စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပြီး သူမကလည်း သင့်အကြောင်းသိချင်နေတဲ့ပုံရတယ်ဆိုရင် နောက်ရက်တွေမှာ စာပို့ပြီး တွေ့ဆုံကြဖို့ ချိန်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင့်အပေါ်မှာ သူမရဲ့ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စာပေးပို့ပါ။ တကယ်လို့ သူမက သင့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားပုံမပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့စာတွေက ရယ်မောစရာတွေနဲ့ ဟာသတွေဖြစ်သင့်ပါတယ်။
စာပေးပို့တဲ့အခါမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောရတာထက် အခွင့်အရေးတွေ ပိုရတာကို ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြနိုင်မယ့် စာတွေပေးပို့ပါ။ တွေ့ဆုံကြဖို့ ချိန်းတဲ့အခါမှာ သူမ အားမအားကို မေးမနေပဲ။ တွေ့မယ့်အချိန်၊ နေရာ စတာတွေကို တန်းပြောသင့်ပါတယ်။ သူမဖက်က နာရီအတော်ကြာလို့မှာ အကြောင်းပြန်မလာဘူးဆိုရင် မေးခွန်းအမှတ်အသား (?) လေးပေးပို့ပါ။ ဒီလိုမှ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ စာမပြန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ မအားဘူးဆိုရင်လည်း ပြဿနာမရှိတဲ့အကြောင်း အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပဲ သွားမယ့်အကြောင်း ထပ်ပြီးပေးပို့လိုက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သူမဆီက တနည်းနည်းနဲ့ စာပြန်လာမှာ သေချာပါတယ်။
၅။ ပြတ်သားပါစေ။ သူမစိတ်ကူးပြောင်းခွင့် မပေးပါနဲ့။
သင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ သဘောတူပြီးပြီဆိုရင် ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်ဖြစ်မဖြစ်ကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သူမက သေချာပြတ်ပြတ်သားသားအဖြေတစ်ခုခုမပေးသေးဘူးဆိုရင် အတည်ပြုချက်ရတဲ့အထိ စာပို့ဖို့ လိုပါတယ်။
၆။ ချိန်သားကိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင့်အနေနဲ့ စတင်တွေ့ဆုံတဲ့နေ့ရဲ့ ညအချိန်မှာပဲ စာပို့သင့်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာ ထပ်ပြီး နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြဖို့ ချိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ စာပို့ဖို့ကို အချိန်ဆွဲနှောင့်နှေးနေတာက ပျင်းရိငြီးငွေ့သွားပြီး အငြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ အစပျိုးမှုတိုင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အရှိန်မသေအောင် လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။
နောက်တစ်ချက်က သူမအလုပ်များနေမယ်လို့ ထင်ရတဲ့အချိန်မှာ စာမပို့ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စာက သူမကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သလို ပြန်စာလည်း လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သူမရဲ့အစီအစဉ်တွေကို မသိဘူးဆိုရင် ညနေပိုင်းမှပို့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးက သူမဆီက ဖုန်းနံပါတ်ရပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန်စာပို့ရမလဲဆိုတာကိ မေးပါ။ သူမပြောတဲ့အချိန်အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာပြီး စာပို့ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သူမဖက်က စာပြန်ဖို့လည်း တာဝန်ရှိသလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
သူမဆီကို စာတွေပေးပို့ရမှာ ဆက်တိုက်မပို့ပါနဲ့။ သူမဆီကို စာကို ပြန်စာပေးပို့ဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုစောင့်ဆိုင်းပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့စာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာလည်း နာရီပိုင်းလောက်ခြားပြီးမှ ပေးပို့ပါ။ ဒီလိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် အပြင်မှတွေ့ချင်စိတ်ပိုပြီး များလာစေနိုင်ပါတယ်။ သူမက အချိန်အတော်ကြာမှာ စာပြန်တတ်တယ်ဆိုရင်ရင် သင်လည်း အချိန်ကြာမှ စာပို့တာ၊ စာပြန်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပါ။
၇။ တိုတောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါစေ။
စကားလုံးတွေအများကြီးနဲ့ စာတွေက ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ လိုရင်းအချက်ကိုမပျောက်စေပဲ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင် ရေးပါ။ သင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုကို လျို့ဝှက်ထားတာမျိုးကို မိန်းကလေးတွေက အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စာပို့တဲ့နေရာမှာ သဲလွန်စတွေပေးပြီး တစ်ခုခုကို လျို့ဝှက်ထားတာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၈။ အဖြေပြန်ရဖို့ တွန်းအားပေးပါ။
သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှု စာပို့တာကို မိန်းကလေးဖက်က အကြောင်းမပြန်ဘူးဆိုရင် စာပြန်ဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ စကားတစ်ခုခုကို စာပို့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – မင်းအလုပ်များမှန်သိပါတယ်။ အချိန်ရရင် စာပြန်ပါ။ စသဖြင့် ပေးပို့ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ယဉ်ကျေးရာရောက်ပြီး ယောင်္ကျားပီသစေပါတယ်။
စာပို့တဲ့နေရာမှာ စာလုံးပေါင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေက တဖက်သူအတွက် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးသက်ရောက်ပြီး ရိုင်းရာကျပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စာကို မပို့ခင်မှာ စာလုံးပေါင်းတွေကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ သင်္ကေတတွေ၊ အတိုကောက်တွေနဲ့ စတစ်ကာတွေက လန်းတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံသုံးရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။
မိနျးကလေးတဈယောကျကို စာပို့ပွီး ခြိနျးဆိုနိုငျဖို့ နညျးလမျး(၉)ခု
မိနျးကလေးတဈယောကျဆီကို ဖုနျးကနတေဆငျ့စာပို့ခွငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ စိတျခံစားမှုတှကေို ဖုံးကှယျထားနိုငျပွီး သခြောစဉျးစားလုပျဆောငျနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျစကားပွောမယျဆိုရငျ အဖွတေဈခုကို သခြောပွငျဆငျဖွဆေိုဖို့ အခြိနျအမြားကွီးမရနိုငျသလို သငျ့ရဲ့အသံနအေသံထားကလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုကငျးမဲ့နသေလို ဖွဈစပေါတယျ။ စာပို့မယျဆိုရငျတော့ ဒီအခကျအခဲတှအေားလုံးကို ကြျောလှားနိုငျမှာပါ။ စာပို့တဲ့နရောမှာ မိနျးကလေးဖကျက ပွနျစာရရှိဖို့နဲ့ အခွအေနကေောငျးလို့ အပွငျမှာတှကွေ့မယျဆိုရငျလညျး ခြိနျးတဲ့နရောကို သခြောပေါကျရောကျလာစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှရှေိပါတယျ။
၁။ သူမကို စတငျခဉျြးကပျခြိနျမှာကတညျးက စာပို့ပါ။
စတှပွေီ့းသုံးရကျနမှော ပွနျဆကျသှယျရမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးကို မထေ့ားလိုကျပါတော့။ သုံးရကျဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ သငျ့ကို စတှခေဲ့တဲ့ပုံရိပျက မှေးမှိနျပြောကျကှယျနနေိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး အခွားယောင်ျကြားလေးတဈယောကျယောကျနဲ့ နောကျထပျအစီအစဉျတှရှေိသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက သူမရဲ့ဖုနျးနံပါတျကို သိရပွီဆိုတာနဲ့ စကားပွောနတေုနျးဖွဈစေ၊ ထှကျလာပွီးသိပျမကွာခငျဖွဈစေ အခြိနျတိုအတှငျးမှာကို စာပို့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ဖုနျးနံပါတျကိုလညျး သူမ သိရှိပွီးသားဖွဈသှားစနေိုငျသလို နောကျထပျစာတှေ ပို့တဲ့အခါမှာလညျး စာပို့ရတဲ့အကွောငျးရငျးကို သိပျရှငျးပွစရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောကျတဈခကျြ စတငျတှဆေုံ့ပွီးခြိနျမှာပဲ စာပို့လိုကျတာက အပွနျအလှနျစာပို့ဆကျသှယျမှုတဈခုကို တညျဆောကျလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျနတှေ့မှော သူအနနေဲ့ စာပွနျပို့နိုငျဖို့ လှယျကူသှားစပေါတယျ။
ပထမဆုံးစာတှေ ပေးပို့ခြိနျမှာ တှဆေုံ့ခြိနျက ပွောဆိုဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာနဲ့ ပတျသကျဆကျနှယျတာပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ သူမနဲ့ ပတျသကျပွီး သငျသိထားပွီးသားအကွောငျးအရာတဈခုခု၊ ဒါမှမဟုတျ နှဈယောကျစလုံးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အရာတဈခုခုအကွောငျး ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ သူမမှာ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတဈကောငျမှေးထားတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီတိရိစ်ဆာနျနဲ့ပတျသကျပွီး တဈခုခုပေးပို့ပါ။ နောကျတဈခကျြက စာတှပေေးပို့ရာမှာ သူမရဲ့နာမညျကို ထညျ့သှငျးရေးသားတာက ပိုပွီးရငျးနှီးခငျမငျစပေါတယျ။
၃။ ရညျရှယျခကျြတဈခုနဲ့ စာပို့ပါ။
သငျ့အနနေဲ့ စတငျတှဆေုံ့ခြိနျက စကားပွောဖွဈခဲ့ပွီး သူမကလညျး သငျ့အကွောငျးသိခငျြနတေဲ့ပုံရတယျဆိုရငျ နောကျရကျတှမှော စာပို့ပွီး တှဆေုံ့ကွဖို့ ခြိနျးဆိုနိုငျပါတယျ။ သငျ့အပျေါမှာ သူမရဲ့ယုံကွညျမှုကို တညျဆောကျနိုငျဖို့ ရညျရှယျပွီး စာပေးပို့ပါ။ တကယျလို့ သူမက သငျ့အပျေါစိတျဝငျစားပုံမပေါကျဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့စာတှကေ ရယျမောစရာတှနေဲ့ ဟာသတှဖွေဈသငျ့ပါတယျ။
စာပေးပို့တဲ့အခါမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျစကားပွောရတာထကျ အခှငျ့အရေးတှေ ပိုရတာကို ဖျောပွပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိကွောငျး ဖျောပွနိုငျမယျ့ စာတှပေေးပို့ပါ။ တှဆေုံ့ကွဖို့ ခြိနျးတဲ့အခါမှာ သူမ အားမအားကို မေးမနပေဲ။ တှမေ့ယျ့အခြိနျ၊ နရော စတာတှကေို တနျးပွောသငျ့ပါတယျ။ သူမဖကျက နာရီအတျောကွာလို့မှာ အကွောငျးပွနျမလာဘူးဆိုရငျ မေးခှနျးအမှတျအသား (?) လေးပေးပို့ပါ။ ဒီလိုမှ အခြိနျအတျောကွာတဲ့အထိ စာမပွနျသေးဘူးဆိုရငျတော့ မအားဘူးဆိုရငျလညျး ပွဿနာမရှိတဲ့အကွောငျး အိမျနီးခငျြးမိတျဆှနေဲ့ပဲ သှားမယျ့အကွောငျး ထပျပွီးပေးပို့လိုကျပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ သူမဆီက တနညျးနညျးနဲ့ စာပွနျလာမှာ သခြောပါတယျ။
၅။ ပွတျသားပါစေ။ သူမစိတျကူးပွောငျးခှငျ့ မပေးပါနဲ့။
သငျနဲ့ တှဆေုံ့ဖို့ သဘောတူပွီးပွီဆိုရငျ ဒီအစီအစဉျအတိုငျးဆကျဖွဈမဖွဈကို ပွနျစဈဆေးကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ တကယျလို့ သူမက သခြောပွတျပွတျသားသားအဖွတေဈခုခုမပေးသေးဘူးဆိုရငျ အတညျပွုခကျြရတဲ့အထိ စာပို့ဖို့ လိုပါတယျ။
၆။ ခြိနျသားကိုကျဖို့ လိုပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ သငျ့အနနေဲ့ စတငျတှဆေုံ့တဲ့နရေဲ့ ညအခြိနျမှာပဲ စာပို့သငျ့ပါတယျ။ နောကျနတှေ့မှော ထပျပွီး နှဈယောကျတညျးတှကွေ့ဖို့ ခြိနျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားဖို့ လိုပါတယျ။ စာပို့ဖို့ကို အခြိနျဆှဲနှောငျ့နှေးနတောက ပငျြးရိငွီးငှသှေ့ားပွီး အငွငျးခံရနိုငျပါတယျ။ အစပြိုးမှုတိုငျးမှာ စိတျလှုပျရှားမှုရှိပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အရှိနျမသအေောငျ လှုံ့ဆျောပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။
နောကျတဈခကျြက သူမအလုပျမြားနမေယျလို့ ထငျရတဲ့အခြိနျမှာ စာမပို့ပါနဲ့။ သငျ့ရဲ့စာက သူမကို အနှောကျအယှကျဖွဈစနေိုငျသလို ပွနျစာလညျး လာမှာမဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့ သူမရဲ့အစီအစဉျတှကေို မသိဘူးဆိုရငျ ညနပေိုငျးမှပို့တာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
နောကျထပျနညျးလမျးတဈမြိုးက သူမဆီက ဖုနျးနံပါတျရပွီဆိုတာနဲ့ ဘယျအခြိနျစာပို့ရမလဲဆိုတာကိ မေးပါ။ သူမပွောတဲ့အခြိနျအတိုငျး အတိအကလြိုကျနာပွီး စာပို့ပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ သူမဖကျက စာပွနျဖို့လညျး တာဝနျရှိသလို ဖွဈသှားစပေါတယျ။
သူမဆီကို စာတှပေေးပို့ရမှာ ဆကျတိုကျမပို့ပါနဲ့။ သူမဆီကို စာကို ပွနျစာပေးပို့ဖို့အတှကျ အခြိနျတဈခုစောငျ့ဆိုငျးပါ။ ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့စာတဈခုနဲ့ တဈခုကွားမှာလညျး နာရီပိုငျးလောကျခွားပွီးမှ ပေးပို့ပါ။ ဒီလိုပေးပို့ခွငျးအားဖွငျ့ အပွငျမှတှခေ့ငျြစိတျပိုပွီး မြားလာစနေိုငျပါတယျ။ သူမက အခြိနျအတျောကွာမှာ စာပွနျတတျတယျဆိုရငျရငျ သငျလညျး အခြိနျကွာမှ စာပို့တာ၊ စာပွနျတာတှေ လုပျဆောငျပါ။
၇။ တိုတောငျးပွီး စိတျဝငျစားစရာဖွဈနပေါစေ။
စကားလုံးတှအေမြားကွီးနဲ့ စာတှကေ ပငျြးစရာကောငျးပါတယျ။ လိုရငျးအခကျြကိုမပြောကျစပေဲ စိတျဝငျစားစရာဖွဈအောငျ ရေးပါ။ သငျနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈခုခုကို လြို့ဝှကျထားတာမြိုးကို မိနျးကလေးတှကေ အရမျးကို စိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စာပို့တဲ့နရောမှာ သဲလှနျစတှပေေးပွီး တဈခုခုကို လြို့ဝှကျထားတာမြိုး ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
၈။ အဖွပွေနျရဖို့ တှနျးအားပေးပါ။
သငျ့ရဲ့ခြိနျးဆိုမှု စာပို့တာကို မိနျးကလေးဖကျက အကွောငျးမပွနျဘူးဆိုရငျ စာပွနျဖို့အတှကျ ထိရောကျတဲ့ စကားတဈခုခုကို စာပို့ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ – မငျးအလုပျမြားမှနျသိပါတယျ။ အခြိနျရရငျ စာပွနျပါ။ စသဖွငျ့ ပေးပို့ပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ ယဉျကြေးရာရောကျပွီး ယောင်ျကြားပီသစပေါတယျ။
စာပို့တဲ့နရောမှာ စာလုံးပေါငျးကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ တဈခါတဈလေ စာလုံးပေါငျးအမှားတှကေ တဖကျသူအတှကျ အဓိပ်ပါယျတဈမြိုးသကျရောကျပွီး ရိုငျးရာကပြါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စာကို မပို့ခငျမှာ စာလုံးပေါငျးတှကေို သခြောစဈဆေးပါ။ သင်ျကတေတှေ၊ အတိုကောကျတှနေဲ့ စတဈကာတှကေ လနျးတာမှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အလှနျအကြှံသုံးရငျလညျး မကောငျးပါဘူး။
Previous: စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တို့၏ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် အကြောင်းရင်း (၇)
Next: ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘ၀သင်ခန်းစာ